🥇 Chirongwa chekufambisa zvinhu
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 521
Vhidhiyo yechirongwa chekufambisa zvinhu
Raira chirongwa chekufambisa zvinhu
Iko kusununguka kwemahara kwekugadzirisa zvinhu kuri kwechokwadi kana kuti hazvigoneke kuti uwane chimwe chinhu chakakosha mahara? Tichaedza kupindura uyu mubvunzo mune ino chinyorwa. Mhinduro pfupi ndeyekuti hongu - ndeyechokwadi. Asi mubvunzo ndewokuti, rwunoita sei rudzi urwu rwechirongwa, uye rwuri chero runobatsira zvachose? Iyo software yekuvandudza timu yeUSU Software inopa mhinduro isinganzwisisike - chete demo vhezheni yemapurogiramu akanaka anogona kusununguka. Dzakazara vhezheni dzeaya mapurogiramu anogara ari akabhadhara chigadzirwa uye iyo USU Software haina zvimwe izvozvo.
Iyo demo vhezheni yeUSU Software inosanganisira ese ekutanga mashandiro ayo chero bhizinesi angangoda. Nekudaro, iyo demo vhezheni ine yakaganhurirwa yekuyedza nguva uye nekudaro haina kukodzera kwenguva refu-nguva yekufambisa zvinhu michina. Chinangwa chekugovera ndechekuziva ruzivo chete. Chirongwa chedu chinogona kutorwa pasi mahara uye unogona kuzviziva nekushanda kwaro mukati memavhiki maviri azere enguva yekutongwa. Unogona kuwana iyo demo vhezheni pane yedu yepamutemo webhusaiti. Kuti utenge iyo yakazara vhezheni, bata timu yekutsigira tekinoroji uchishandisa zvikumbiro zvinogona kuwanikwawo pawebhusaiti. Zvese zvakadzama ruzivo nezve kugona kwesicelo kunowanikwa imomo zvakare.
Hazvina musoro kushandisa zvemahara zvirongwa zvekutakura zvinhu. Zvirongwa zvakaita seizvi hazvigone kuona kuzadzikiswa kuzere kweotomation kune ese mabasa anomira pamberi pebhizinesi rinoda manejimendi akajeka chero anotakura uye logistic kambani inoda. Semuenzaniso, kana iwe ukatenga chikumbiro kubva kune vanogadzira iyo USU Software, iwe unowana mukana wakanaka kwazvo wekutarisa basa rekambani izere, uye kune mumwe nemumwe mushandi mumwe nemumwe. Chirongwa chakashongedzwa nekushanda kwekutevera vashandi 'maawa ekushanda. Basa rega rega rinoitwa nemushandi rakanyorwa. Zvakare nenguva yakashandiswa pairi uye nemhando yebasa yakapihwa.
Kana iwe uchida chirongwa chekufambisa zvinhu, hazvina musoro kungoedza kurodhaunura mahara, asi bhizinesi rako harina mabhajeti akakurisa izvozvi, tinogona kukupa mhinduro yedu yekugadzirisa zvinhu zvekutakura, nemutengo wakaderera, asi uine akasiyana akasiyana emabasa anobatsira. Semuenzaniso, nerubatsiro rweUSU Software, iwe unozokwanisa kuteedzera zvese zvinotumirwa munguva chaidzo. Asi mashandiro echirongwa chekufambisa manejimendi manejimendi haangomire ipapo.
Iyo yekushandisa dhatabhesi ine yakazara ruzivo nezve kutakura zvinhu. Iwe unozokwanisa kukurumidza kuwana iyo ruzivo iyo inochengeterwa muchirongwa dhatabhesi. Semuenzaniso ruzivo nezve iye anogamuchira uye anotumira iyo pasuru, hunhu hwechigadzirwa, kukura kwayo, huremu, zvichingodaro. Uye zvakare, iwe unogona kukumbira kukosha kweiyo nhumbi, iko iko kwekutumira pamepu, uye zuva rekutumira.
Iyo yekufambisa logistics manejimendi chirongwa, icho chinogona kutorwa pasi mahara senge demo vhezheni, ine akati wandei ebhenefiti pamusoro pemahara zvachose maapplication. Chirongwa chaunotora pasi mahara hachizokwanisa kupa kufukidza kwakadai maererano nemabasa anokwanisa kuitwa neSUU Software. Zvakare, maererano neiyo reshiyo yematanho akasiyana senge mutengo-mhando, kunyangwe pakati peasina-maapplication, basa redu richakamira. Chizvarwa chitsva chekufambisa logistics accounting chirongwa kubva kuUSU Software timu chinokwana zvakakwana muchimiro chemakambani ekufambisa nhumbi uye chero mamwe maratidziro emagetsi.
Mahara ekufambisa mashandisirwo ekushandisa haazokwanise kuteedzera multimodal kutumirwa nehutano hwakakwana. Uye iyo USU Software ichagadzirisa zvakakwana basa rekutevera nzira yekutakura yenhumbi, mhando dzekutakura, uye inokwanisa kuimisa nekutakura kwakashandiswa. Kana zvasvika pachirongwa chedu, hazvina basa kuti kambani inoshandisa rudzii rwekutakura kana ichifambisa zvinhu. Kunyangwe chiri chekufambisa nendege, njanji, marori, ngarava, kana kutakura kwakawanda - chirongwa chedu chichava chinoshanda uye nekukurumidza mukupedzisa ese ayo mabasa. Zvimwe zvinhu zvechirongwa izvo zvinobatsira nekutakura zvinhu pane chero bhizinesi zvinosanganisira zvakanakira sekugona kuronga kutakura uye kuendesa nerudzi, zvinoenderana nesaizi yechinhu uye huwandu hwezvinhu pakutakura.
Kana sangano risina matavi mazhinji ekumhiri kwemakungwa, uye huwandu hwezvinhu zvakatakurwa zvisina kunyanya kukura, zvinodikanwa kuti utenge vhezheni yekambani diki, nepo paine imwe sarudzo yemabhizinesi ane ruzivo ane matavi munyika dzakasiyana. Chirongwa chekushandisa chekutakura zvinhu zvaunogona kurodha mahara chete muchimiro chedemo vhezheni chinoshanda kwenguva shoma.
Mahara zvigadzirwa zvekushandisa zvinopa chete yakaganhurirwa nguva yekushandisa. Kutenga rezinesi vhezheni yechikumbiro pamutengo wakanyanya, iwe unowana chirongwa chakanyatsogadziridzwa chekugadzirisa iro hofisi basa mumunda wekutakura zvinhu uye vafambi. Iyo USU Software inochinja-chinja zvekuti inokodzera iyo otomatiki yechero logistics kambani.
Paunotanga kumhanyisa chinoshandiswa, iwe uchafanirwa kunyoresa uye kuchipa mvumo muchirongwa. Mushure mekupinda mumushandisi kupihwa sarudzo yemazhinji dhizaini dhizaini, izvo zvinozovabatsira kunongedza nzvimbo yavo yebasa. Mushure mekusarudza dhizaini uye dhizaini dhizaini, iyo opareta inoenderera kusarudzo yekushanda uye marongero e interface. Dzese shanduko dziri kuchengetwa muakaundi account uye panguva inotevera mvumo, hapana chikonzero chekugadzirisa zvese zvakare gare gare. Kune wega wega mushandisi, yavo yega account inogadzirwa, ine ayo ega marongero.
Zvirongwa zvemahara hazvina kuchinjirwa kumabasa akakura, saka zvirinani uye zvinobatsira kuti utenge chirongwa chakabhadharwa, chinoshanda zvine hungwaru chinokubatsira kupedzisa mabasa ese aunopihwa. MuUSU Software, mabasa ese akarongeka zvakaringana, ruzivo rwacho runochengetwa mumaforodha akakodzera, mairi zviri nyore kuwana blockchain yeruzivo yekufarira. Zvirongwa zvemahara zvekushambadzira hazvizokwanise kukubatsira kuita kutumira kwakawanda kwevateereri vakasarudzwa, asi chirongwa chedu chinogona kubata basa iri nyore. Izvo zvakakwana kungoita yakanangwa kusarudzwa kwevanofambidzana uye kurekodha meseji. Iko kunyorera kuchaitisa zvimwe zviito nenzira ye otomatiki, inozoderedza yakawanda yemari.
Kuitwa uye kushandiswa kwechirongwa chedu zvinobvumidza iwe kudzikisa huwandu hwevashandi vanodikanwa kune rako bhizinesi zvakanyanya. Unogona kudhawunirodha uye wotanga kushandisa chirongwa chekufambisa zvinhu izvozvi, pasina kumbomira kugadziridza kwebasa rehofisi. Nekubhadhara mari diki-diki yekutenga iyo USU Software, unochengetedza mari hombe pakuchengeta vashandi vakawandisa.
Chirongwa chedu chekutakura zvinhu, izvo zvaunogona kurodha mahara paUSU Software webhusaiti muchimiro chedemo vhezheni, ine modular yekushandisa zano, izvo zvinoita kuti zvive nyore kune vanoshanda kushanda nayo. Unogona kudhawunirodha uye kushandisa chirongwa nekukurumidza uye pasina kana kunetseka. Kuti utenge iri rezinesi vhezheni yechikumbiro, ndapota nyorera nyanzvi dzekambani yedu. Vese vanobata mazita akanyorwa pane yepamutemo webhusaiti yekambani yedu.